Moya China Medical Surgical Fack Fack factory kunye nababoneleli |Zhongxing
Amaleko amathathu okhuseleko .Umcu wePlastiki webhulorho ot empumlweni .Imitya ethambileyo yendlebe ethe tyaba.Isikhumba esinobuhlobo nelaphu elilukiweyo .I-welding ye-Physical untrasonic .Ukusetyenziswa kwezonyango ,Isibhedlele , uKhuseleko lweMihla .PlANAR EARLOOP/17.5*9.5CM .PP+Melibown Non -Lukiweyo.25,28Gsm okanye Customized .
Iimaski zotyando lwezonyango zinokuchasana nokuhamba komoya okuncinci, umqobo wegazi lokwenziwa, ukuhluzwa kwento encinci kunye neebhaktheriya, i-flame retardant kunye nezinye iimpawu;kubonelelwe ngefom enyumba.Ukuchasana nokuhamba komoya ngaphantsi kwe-49 Pa, ukusebenza kakuhle kokucoca ibhaktheriya kungaphezulu kwe-95.
Imveliso ifanelekile ukukhuselwa okusisiseko kwabasebenzi bezonyango okanye abasebenzi abanxulumeneyo, kunye nokukhuselwa ekusasazeni i-pathogens, i-micro-organisms, igazi, i-fluid yomzimba kunye ne-spatter ngexesha lomsebenzi ohlaselayo, kwaye idlala indima yokukhusela izinto ezimbini.
Imveliso ingasetyenziswa kumaziko ezonyango, iilebhu, ii-ambulensi, amakhaya kunye nezinye.
Ukupakishwa okuzimeleyo kweemaski zotyando lwezonyango
Iimaski zotyando lwezonyango iipakethe ezingama-50
Iimaski zoqhaqho lwezonyango zinezi mpawu zilandelayo:
1.Umaleko wangaphandle womzimba wemaski uyilaphu elingenatyhefu elingalukwanga elenziwe ngepolypropylene;
2.Uluhlu lwangaphakathi lwemaski lwenziwe ngezinto ezingenayo i-polypropylene, eyona nto ingalukwanga ngelaphu elinomoya womyeni we-pro-umyeni;
3.Into yokucoca imaski yenziwe ngelaphu elingalukwanga elinyibilikayo elicolekileyo kakhulu elinyanyekelwa ngumbane omileyo, kwaye ukusebenza kakuhle kokucoca kwebhaktheriya kungaphezulu kwe-95%;
4.I-Mask body ye-clip yempumlo yeplastiki kwinkqubo yokunxiba ulungelelwaniso olufanelekileyo, ukunxiba ngokukhululeka kunye nokukhululeka;
5.Ukuchasana nokuphefumula kungaphantsi kwe-49 Pa, ngexesha lokugqoka;
6.Le mveliso ithatha itekhnoloji yokucinezela i-edge engenamthungo kunye netekhnoloji ye-welding ye-ultrasonic ukwenza imaski ithambile, yomelele kwaye ihle.
Iimaski zoqhaqho lwezonyango zisetyenziswa ikakhulu kumaziko ezonyango, iilebhu, ii-ambulensi, amakhaya, iindawo zikawonke-wonke kunye nezinye iindawo zokunxiba, ezigquma umlomo womsebenzisi, impumlo kunye ne-mandible, ukuthintela i-pathogen microorganisms, ulwelo lomzimba, amaqamza abhabhayo, amasuntswana kunye nolunye usulelo oluthe ngqo. yezithintelo zomzimba.Iindlela eziphambili zokusetyenziswa zezi:
Igama lesixhobo soNyango IMask yoNyango lwezoNyango
Igama Lake Spoon
Izinto eziphathekayo Polypropylene nonwoven
Ukusebenza kakuhle kokucoca iintsholongwane 99 ekhulwini
Intsalela ye-ethylene oxide ≤5μg
Inombolo yokuthobela Inombolo yokuthobela
Ukupakisha ukucaciswa 50pcs / ibhokisi 2000pcs / ibhokisi
Isicelo Isetyenziselwa ukukhusela ngokuchasene nokusasazeka kwe-pathogenic microorganism, igazi, ulwelo lomzimba kunye ne-spatter, kwaye idlala indima yokhuseleko lwebhayoloji ye-bi-directional.
Isihlwele esisebenzayo abasebenzi bezonyango, abasebenzi beempumlo ezibandayo kunye neempumlo, abasebenzi beendawo zoluntu, njl
Imvelaphi Jiangsu, eTshayina
Umenzi IHuaian Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Inombolo yoBhaliso. SXZZ 20202141604
Ngaphambili: Imaski yobuso bezonyango
Okulandelayo: FFP2 Mask 5 ply
Umsebenzi Wemaski, Ffp1 Imaski elahlayo, Iimaski ezi-3 eziLahlwayo ngeFda, 3 Gcoba iMaski yoBuso eLahliweyo, Ukulahlwa kweHalf Mask Respirator, Mask Njengobuso,